एमसीसीबिरुद्ध सशस्त्र युद्धको घोषणा, कसले गर्दैछ नेतृत्व ? विज्ञप्तिसहित — Sanchar Kendra
एमसीसीबिरुद्ध सशस्त्र युद्धको घोषणा, कसले गर्दैछ नेतृत्व ? विज्ञप्तिसहित
काठमाडौं । चौतर्फी बिरोधकाबीच देउवा सरकारले संसदबाटै पास गरेको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबिरुद्ध सशस्त्र युद्धको घोषणा गरिएको छ ।
‘हिमाल सुरक्षा परिषद नेपाल’ले ‘सशस्त्र युद्ध’को घोषणा गरेको जनाएको छ। भूमिगत शैलीमा आतङक सिर्जना गरिरहेको सो समूहले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेको जनाएको छ।
उक्त समूहले विज्ञप्तिमार्फत एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विरोध गर्दै संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलिय प्रजातन्त्रसहित २०४७ सालको संविधान लागू गर्न माग पनि गरेको छ।
यसअघि प्रहरीले झापामा हिमाल सुरक्षा परिषद् नेपालका गौरादह–२ का ३८ वर्षीय सुमनकुमार कार्की, कनकाई–३ का ४१ वर्षीय भीष्म थापा, दमक–९ की ५० वर्षीया देवी बाँस्कोटा गुरागाईं, कनकाई–३ का ५८ वर्षीय कुमार भन्ने यमदत्त सिटौला, शिवसताक्षी–१ का ३२ वर्षीय सरुण लिम्बू भनिने दिलकुमार सामेखाम, संखुवासभा खाँदवारी–१० घर भई मोरङ सुन्दर हरैचा बस्ने २९ वर्षीय मनोमहन दाहाल, गौरीगञ्ज–३ का ३२ वर्षीय आनन्द भनिने अनन्तप्रसाद गिरी, गौरादह–५ का ३३ वर्षीय प्रदीप थापा, गौरीगञ्ज–३ का ४५ वर्षीय विजयकुमार दास हलुवाईलाई पक्राउ गरेर सार्वजानिक गरिसकेको छ।
यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना नेपालबाट लखेट्न नसके ठुलो बिनास आउने खतरा रहेको बताएका छन् ।
६ कम्युनिष्ट पार्टी र २ मोर्चाले आयोजना गरेको एमसीसी बिरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लवले एमसीसी आए नेपालमा तमाम विकास र परिवर्त हुन्छ भन्दै केहि दलाल नोकरशाहहरुले भ्रम फैलाउन थालेको भन्दै एमसीसीले नेपालमा विकास नभई बिनाश ल्याउने बताए ।
नेपालमा एमसीसी नशाको रुपमा आउने खतरा बढेको भन्दै उनले त्यो नशामा नफस्न सबै देशभक्त नेपालीहरुलाई सचेत गराएका छन् । अंग्रेजहरुले भारतलाई चिया र चाइनालाई अफिमको नशा खुवाएर देश लुटेको उदाहरण दिंदै महासचिव विप्लवले अहिले अमेरिकाले पनि एमसीसीको लोभ देखाएर नेपालको सम्पति लुट्न खोजेको दावी गरे ।
‘नेपाल एउटा धनको किल्ला हो, त्यो किल्लालाई कब्जा गरेर धन रोहाेर्न अमेरिकनहरु आएका छन् । तिनको पछिपछि पार्टीको स्टिकर टाँसेका केहि लोकल मान्छेहरु हिडेका छन् ।’ उनले भने- ‘हामी सबै सचेत हुनुपर्छ, यदि हामी सचेत भएनौ भने नेपाली युवाहरुले धेरै परसम्म दुख पाउनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ ।’
त्यस्तै उनले यो विशिष्ट बेलाको संसदले देशको स्वाधिनता रक्षा गर्न नसकेको खण्डमा जनताले त्यसको अधिकार खोसेर जनतामा नै फर्काएर देशको रक्षा गर्नुपर्ने बताए ।
‘सामान्य परिस्थितिको संसद होइन, यो विशिष्ट बेलाको संसद हो, जुन संसदभन्दा शक्तिशाली जनता छ। संसद सार्वभौमिक भए पनि यदि त्यसले नेतृत्व गर्न सक्दैन भने त्यो संसदको अधिकार जनताले खोस्नुपर्छ । संसदीय मन्च दिएको त् देशको स्वाधिनताको रक्षा गर भनेर हो नि।
हाम्रो उन्नति र समृद्धी गर भनेर हो ।’ उनले भने- ‘तर त्यो उल्टो हुन्छ भने नेपालका ३ करोड जनताले सोच्नुपर्छ, संसदलाई दिएको त्यो सार्वभौमशक्तिको अधिकार जनताले फिर्ता लिनुपर्छ । त्यो संसदबाट जनतामा फर्काउनु पर्छ । र संसदलके नसकेको लडाँई जनताले लड्नुपर्छ । संसदले देशको रक्षा गर्न सकेन जनताले देशको रक्षा गर्नुपर्छ ।’
उनले फागुन १५ राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेको पुस १ भन्दा खतरनाक कालो दिन रहेको दाबी पनि गरे। ‘कथित जनताको संस्था भनिने संसदबाट नेपाली जनतालाई घात गर्ने घटना घट्यो फागुन १५ गते। यो दिन नेपाली इतिहासमा पुस १ गतेजस्तै कालो दिनका रुपमा इतिहासका रुपमा अंकित भएको छ, उनले भने ।
यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कुर्सी र पैसाका लागि देशलाई एमसीसी दिएर घात गरेको बताए । ‘मानिसले कुर्सी र पैसाको दास बनेपछि ऊ अन्धो बन्छ, केपी ओली र माधव नेपाल त्यसरी नै अन्धो बने,’ उनले भने। यस्तो छ हिमाल सुरक्षा परिषद नेपालले गर्यो ‘सशस्त्र युद्ध’को घोषणा गर्दै जारॆए गरेको विज्ञप्ति –